[14 / 03 / 2020] Soojeedin kusaabsan Qodobka Ugu Dambeeyay ee La Soo Bandhigay Mashruuca AFRAY	03 Afyonkarahisar
[14 / 03 / 2020] Hay'adaha Dheeraad ah ee loo yaqaan 'HATs' ayaa La Soo Bandhigay Awoodda Dhamaan Tareennada oo dhan	06 Ankara
[14 / 03 / 2020] TCDD wuxuu kaqaybgalay Shirka Nidaamka Gaadiidka Smart	34 Istanbul
[14 / 03 / 2020] Isticmaalka Metrobus iyo Isticmaalka Baska ayaa 10 Boqolkiiba Sababay Coronavirus	34 Istanbul
[13 / 03 / 2020] Darawalada IETT waxaa loo xilsaari doonaa imtixaanka Kartida Xirfadeed	34 Istanbul
Maalinta: Oktoobar 25, 2017
Basaska Maalinta Jamhuuriga Bilaashka ah
Dawlada Hoose ee Magaalada Denizli waxay ka dhigtay basas degmeedyo lacag la’aan ah Oktoobar 29 maalinteeda Jamhuuriyadda. Duqa Magaalada Denizli ee Magaalo Weyn Cusmaan Zolan wuxuu sheegay inay soo arkeen sharaftii iyo karaamadii sanadguuradii 94aad ee Jamhuuriyadda. [More ...]
14,5 Milyan Lacagta Lacagta ee loogu talagalay kuwa riddooba Izmit Bay
Qeybta Ilaalinta iyo Xakamaynta Deegaanka Kocaeli ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadeysaa oo ay ogaaneysaa oo ciqaabi doontaa wasakheynta badda ee ay sababaan maraakiibta iyo maraakiibta kale ee ku yaal aagga loo qoondeeyay badda Gacanka Izmit. [More ...]
Magaalooyinka New York waxay soo qaataan kaararka
Laga bilaabo sanadka soo socda, Magaalada New York waxay u dhaqaaqaysaa nidaam cusub oo rog rog ah kaasoo u oggolaanaya taleefannada casriga ah iyo kaararka deynta ee shabakadda gaadiidka dadweynaha oo dhan magaalada. Kaararka duugoobay waxay dhacayaan 2023 magaalada New York [More ...]
Tareenka korantada, oo ku safri kara iyadoon loo baahneyn wado, ayaa duullimaadkeedii ugu horreeyay sameeyay. Sugitaanka 'tareenka caqliga leh', ee safri kara iyadoon loo baahan tareen, wuu dhammaaday. Tareenka korontada ku shaqeeya ayaa safarkiisii ​​ugu horreeyay ku tagay magaalada Zhuzhou, Shiinaha. 300 [More ...]
Abaalmarinta XETUM ee IETT ee Abaalmarinta Stevie
IETT waxay ka heshay abaalmarinta 4 abaalmarinta “Stevie Awards olan, barnaamijka abaalmarinta ganacsiyada adduunka ee lagu ixtiraamo, halkaasoo khubarada caalamiga ah iyo shirkadaha ay ku tartamaan. Ganacsi caalami ah oo sumcad leh, oo abaal marin la siiya ururro ku guuleysta, mashaariicda iyo shaqooyinka heerarka caalamiga ah [More ...]
Mashruuca Tareenka ee Speed-Speed ​​Speed ​​Antalya-Kayseri wuxuu ku gudbo Badxiyo Qaran oo Qaran
Iyada oo mashruuca tareenka xawaaraha sare ee 640 kiiloomitir ee xawaaraha sare ee la qorsheeyay inta u dhaxaysa Antalya iyo Kayseri, jardiinooyin badan oo qaran iyo aagag la ilaaliyo ayaa halis ugu jira in la baabi'iyo. Antalya, Konya, Aksaray, Nevsehir iyo Kayseri. [More ...]
Xayeysiinta shaqaalaysiinta shaqaalaha waxaa daabacday TCDD DPB waxaana la sheegay in shaqaalaha 12 loo qori doono si ay uga shaqaaleeyaan hay'adda dhexdeeda. Shaqaalaha la shaqaaleysiinayo waxaa laga xuli doonaa naafada iyo dembiilayaasha hore. Faahfaahinta iyo [More ...]
Khadka Whatsapp ee BURULAŞ ee Boosaaso
BURULAŞ, oo ku xiran degmada Bursa Metropolitan Municipal, waxay sii wadaa inay horumariso mashaariicda ku wajahan xallinta iyadoo la horumarinayo shabakadaha warbaahinta bulshada. Bayaan lagu soo saaray BURULAŞ, N 07 ayaa laga heli karaa meel kasta oo uu jiro internet leh dalabka WhatsApp ee taleefanka casriga ah: [More ...]
Sivas-Ankara Khadka Xawaaraha Sare ee lagu dhameynayo 2019
Guddoomiyaha Sivas Davut Gül wuxuu yidhi, Lacag dhan afar milyan oo X XXX ah ayaa lagu kharash gareeyay tareenka xawaaraha dheereeya. Qandaraaska rikoodhada ayaa la qabtay bishii hore. Dabcan, shaqooyinka waaweyni way fashilmi karaan. La-wareegida iyo qandaraaslaha ayaa yeelan kara dhibaatooyin. Tareenka Xawaaraha Sare [More ...]
Madaxweynaha Turkiga Ms.
Gaadiidka Turkiga Sen Sivas Laanta 6. Golaha Guud ee Guud. Guddoomiyaha Waaxda Gaadiidka ee Turkiga Sivas Mustafa Nurullah Albayrak, oo qaadanaya codaynta dhammaan ergooyinka waxay cusbooneysiisay kalsoonida. Shirka Golaha Guud [More ...]
Xarumaha Meelaha Sambabka ee loo yaqaan 'Chambaşı Plateau Ski' ayaa la furayaa bisha Diseembar
Muwaadiniinta ayaa soo qulqulaya gaar ahaan bilaha xagaaga Çambaşı Plateau waxay sii wadaa inay ka shaqeeyaan dib u soo nooleynta dalxiiska jiilaalka. Dawlada Hoose ee Magaalada Ordu, Çambaşı Ski Center, oo loo qorsheeyay in la hawl geliyo xilliga qaboobaha, ayaa leh diirimaad diirran. Plant [More ...]
Samsun Metropolitan waxay qaadataa basaska 70 ee gaadiidka dadweynaha
Shirka aan caadiga ahayn ee Golaha Dawlada Hoose ee Magaaladda Xun XXX qodobka ayaa looga hadlay, halka qorshaha "Forensic Medicine field" 3 kun m5'den 2 kun m10'ye marlabaad lasoo maray. Golaha Deegaanka ee Dawlada Hoose ee Samsun maanta waa wax aan caadi ahayn [More ...]
RayHaber 25.10.2017 Warbixinta Shirka
Qodobka dib u celinta ee derbiyada xaraashka ah iyo culeyska sareeya ee ka soo baxa ceelka Ankara-Eskisehir YHT Line Signalization iyo Nidaamyada Isgaarsiinta
Guddoomiyaha gobolka Şerif Yılmaz, Tareenka Gobolka Ayonkarahisar TCDD 7. Agaasimaha gobolka Adem Sivri ayaa la qaabilay. Guddoomiyaha gobolka Şerif Yılmaz wuxuu uga mahadceliyay Sivri booqashadiisa Afyonkarahisar 7. Kuxiriira Agaasinka Gobolka [More ...]
Isticmaalka Metrobus iyo Isticmaalka Baska ayaa 10 Boqolkiiba Sababay Coronavirus
Buundada Wadada Tareenka Ugu Wanaagsan Adduunka
Gawaarida, Gawaarida yar yar iyo Tagaasida ka shaqeysa Gudaha Magaalada iyo Gaadiidka Rakaabka Magaalada-Mersin waa la kala qaadanayaa
Meel loo maro Fayrasyada Gaadiidka Dadweynaha ee Kayseri
Diyaarinta Gaadiidka Ku-meelgaarka ah ee Darıca Aşıroğlu Street
Maanta taariikhda: 14 Maarso 1930 Bernde Akdolunan Beynelmilel
Shirkadda DeSA waxay la saxeexday heshiis wakiilnimo Shirkadda HaslerRail
Warshadda Lamborghini oo xiran
New York Auto Show ayaa dib loo dhigay
Waa imisa Qiimaha Gaaska Kadib Qiima dhimista Gaaska Labaad?
Ololaha Gu'ga Citroen 2020
Sicir-dhimista Labaad Waxay Ku Soo Baxda Gaaska